ခေတ်ဟောင်း စနစ်ဟောင်း အမူအကျင့်များ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်
| တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း
ခေတ်ဟောင်း စနစ်ဟောင်း အမူအကျင့်များ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ် အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ် ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ အမူအကျင့်ဟောင်းတွေကို စွန့်ပယ်ပြီး ခေတ်စံနစ်နဲ့အညီ အတွေးအခေါ် အမူအကျင့်တွေ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်လာပုံကို ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
ဒီစကားဝိုင်းမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံ Alberta တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စောဝင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Indiana တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ငွန်ကျုံးလျန် (Dr Ngun Cung Lian) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အောင်မြင်မယ်လို့ မျှော်လင့်
"ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့အခန်းကဏ္ဍ" ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ဒီမိုကရေစီ ဦးတည်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့ကြောင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ပြော
သူသေ ကိုယ်ရငြ် တိုက်ပြဲဝင် သံခဵပ်
ကျနော်တို.လှိုင်သာယာမှ သန်းခေါင်စာရင်းရုံးမှဝန်ထန်းများဟာ ငွေကြေးအမြောက်အများယူပြီးတော.သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ပေးနေပါတယ် rfa မှတဆင်.နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲထံသို.တင်ပြပေးစေလိုပါသည်
ကျွန်တော်တို့သည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ကျောင်းမှဆရာ/ဆရာမများ၏ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှနုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ မဖွဲ့စည်းရန်မမျိုးမျိုးပြောကြားနေပါသည်။ထိုအကြောင်းကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သိအောင်ပြောပြပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကသ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး
Aug 15, 2012 03:14 AM
Aug 13, 2012 07:18 AM
Please start to change Yangon Intl. airports Immigration and Customs, still want to brive money from poor workers who is working in abraod, go back to home land for vacation, but from the airport, we have give under table money to them. Otherwise, give problem in our passport and try to open to search our bags. Jul 22, 2012 12:30 PM